युरिक एसिड तथा बाथ रोगको समस्या छ? दसैंमा के खाने, के नखाने? कसरी स्वस्थ रहने? :: स्वास्थ्यखबर :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
युरिक एसिड तथा बाथ रोगको समस्या छ? दसैंमा के खाने, के नखाने? कसरी स्वस्थ रहने?
स्वास्थ्यखबर शुक्रबार, असोज २९, २०७८, १४:२४:०४
प्रश्न: डाक्टर'साप नमस्ते। म ३८ वर्षको पुरुष हुँ। मलाई युरिक एसिडको समस्या छ। दसैँको समयमा के कुरामा ख्याल गर्नुपर्ला? युरिक एसिड तथा बाथ रोगीको समस्या भएकाले दसैंमा के खाने, के नखाने? कसरी स्वस्थ रहने? - गोपाल।
डा अन्जल विष्टको उत्तर : जिज्ञासाका लागि धन्यवाद।
बाथ रोग प्रत्यक्ष रुपमा खानपानसँग सम्बन्धित छ। त्यसमा पनि युरिक एसिडसँग सम्बन्धित बाथ रोगलाई खानपानले बढी असर गर्छ। आरथाइटाइटिस, मिर्गौलाको बाथ, मुटु, फोक्सोमा असर गर्ने बाथहरुमा भने खानापनको त्यति असर हुँदैन।
दसैं तथा तिहारलगायतका चाडबाडमा चिल्लो र मसालेदार खानेकुरा बढी खाइन्छ। चिल्ला रोटीहरु तथा विभिन्न थरीका मासुका पकवान घरघरमा पाक्ने गर्दछ। चाडबाडमा अरुबेलाको अनुपातमा मासु बढी खाइन्छ। त्यसैले निरोगी या रोगी मानिसले मासु खाँदा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।
युरिक एसिड तथा गाउट भएका मानिसलाई यसले बढी समस्यामा पार्दछ। युरिक एसिड बढेमा जोर्नी तथा खुट्टाका औंला दुख्ने र सुन्निने हुन्छ। कुर्कुचा दुख्छ र रातो हुने हुन्छ। गोली गाँठा पनि सुनिन्न थाल्छ।
युरिक एसिड बढ्ने भनेको मासु सेवनसँग सम्बन्धित छ। त्यसमा पनि रातो मासुले यस्ता बिरामीलाई झनै राम्रो गर्दैन। रातो मासुमा बढी मात्रामा प्रोटिन हुन्छ। रातो मासुमा हुने प्युरिन कन्टेन्टले युरिक एसिड बढ्छ। दाल तथा गेडागुडीले पनि युरिक एसिडका बिरामीलाई राम्रो गर्दैन। चाडपर्वमा मासु नखानुस् भन्न त सकिँदैन तर त्यही मासुलाई उसिनेर या थोरै तेल राखेर खान सकिन्छ।
मासु खानुपरेमा सीमित मात्रामा खाने गर्नुपर्दछ। रातो मासु नखाएर सेतो मासु खाने गर्नुपर्छ। माछा र कुखुराको खाँदा हुन्छ। त्यसले युरिक एसिड बढ्ने तथा दुःख दिने सम्भावना कम हुन्छ।
गेडागुडीले पनि समस्या निम्त्याउँछ भन्ने त गरिन्छ तर त्यसले ठ्याक्कै हानि गर्छ या गर्दैन भनेर निर्णयमा कोही पनि पुगिसकेको छैन। बिरुवाहरुबाट आउने प्रोटिनले बिगार गर्दैन भनिन्छ। तर, धेरै बिरामी टमाटर खाएँ, गेडागुडी खाएँ अनि दुखाइ बढ्यो भनेर आउनुहुन्छ।
हुन त धुमपान र मद्यपान पक्कै पनि राम्रो होइन। ड्रिंक्सहरु साथीभाइसँग अलि बढी नै खाने चलन छ नेपालीको। जुन बाथ रोगीका लागि राम्रो होइन।धुमपानले मेरुदण्डको बाथ गराउन सक्छ, मेरुदण्डलाई नराम्रो असर पार्न सक्छ।
ड्रिंक्सको सेवनसँग युरिक एसिडको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ। मद्यपान सेवन गर्नेबित्तिकै भोलिपल्ट युरिक एसिड बढिहाल्छ। त्यसैले पनि चाडपर्वपछि यस्ता बिरामीहरु धेरै बढ्ने गरेका छन्।
धेरैले बियरलाई त्यति कडा ड्रिंक्सको रुपमा मान्दैनन् र यो धेरै खाएपनि हानिकारक हुँदैन भन्ने सोच्छन्। तर बियरले अरु ड्रिंक्सलेभन्दा बढीहानी पुर्‍याउँछ। जसलाई रक्सी खाएको भोलिपल्टै एसिड बढ्ने हुन्छ। यस्ता बिरामीले मद्यपान बर्जित नै गर्नुपर्ने हुन्छ।
भोजभतेर तथा चाडपर्वमा धेरै पेयपदार्थ सेवन गर्ने बानी हुन्छ। त्यस्ता पेय पदार्थमा बढी मात्रामा चिनीको प्रयोग गरिएको हुन्छ। कृत्रिम गुलियोले राम्रो गर्दैन।बढी मासु तथा रक्सी, पेयपदार्थ सेवनले प्रत्यक्ष असर गर्छ त्यसैले यसलाई सकेसम्मै प्रयोगमा नल्याएको राम्रो।
हामी चाडपर्व आउनेबित्तिकै रिल्याक्स मुडमा हुन्छाँै। शारीरिक रुपमा त्यतिसक्रिय हुँदैनौं। खाएपछि हिँडडुल गर्ने बानी छैन।
अरु युरिक एसिडसँग जोडिएर आउने कुरा भनेको मेटाबोलिक सिन्ड्रोम हो। गाउट वा युरिक एसिडका बिरामीलाई मधुमेह बढ्नसक्ने सम्भावना बढी हुन्छ।
कोलोस्ट्रोल तथा उच्च रक्तचाप पनि बढ्छ।कोलोस्ट्रोल, रक्तचापजस्ताकुराहरु मुटुसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका विषय हुन्। शारीरिक क्रियाकलापको कमी भएपछि कोलेस्ट्रोल बढ्छ अनि तौल पनि बढ्छ।मसालेदार तथा गुलियो खानाले सुगर बढ्न सक्छ। छालाका समस्याहरु पनि यसले ल्याउन सक्छ। एसेली तथा ल्युपसको सम्भावना हुन सक्छ।
तास खेल्ने, साथीभाइसँग बसेर धेरै टिभी हेर्ने, पलेँटी मारेर बसेर काम गर्नेलाई ओस्टियो आरथाइटिस हुने सम्भावना हुन्छ। विशेषगरी यो बुढेसकाल लागेपछि हुने समस्या हो। यसलाई घुँडाहरु खिइने रोगको रुपमा हामीले चिन्छौँ। विशेषगरी घुँडा खुम्च्याएर बस्दा बढी दुख्ने सम्भावना हुन्छ। बस्ने आसन नमिल्दा दुखाइ तथा सुन्निने बढाइदिन्छ। घुँडा खिइसकेको छ भने यसरी बस्नाले पक्कै पनि दुखाइ बढाउँछ।
दसैँमा मासुजन्य खानपान नै बर्जित गर्नेभन्दा पनि कति खानुपर्छ भनेर आफैँ सोच्नुपर्छ। उदाहरणको लागि युरिक एसिडको बिरामीको खुट्टा दसैँको १ हप्ता अगाडिसुन्निएकोथियो तर अहिले ठिक हुने क्रममा छ भने त्यस्तो मान्छेले मासु नखाँदा नै बेस। मैले धेरै खाँदा के बेफाइदा हुन्छ भनेर आफैं सचेत हुनुपर्छ।
युरिक एसिडबाहेक सबै बाथरोगीहरुलाई खाना बार्नुपर्ने खासै त्यस्तो केही पनि छैन। तर उनीहरु जोगिनुपर्छ। बाथ रोग बिग्रेर मिर्गौलाको समस्या भयो भने बार्नुपर्ने छुट्टै भयो। बाथ रोगसँग उच्च रक्तचाप जोडिएर आएको हुन्छ त्यसले पक्कै पनि बार्नुपर्ने हुन्छ। बाथ रोगकै लागि भनेर त्यस्तो बार्नुपर्ने छैन। तर, स्वस्थ्य जीवनशैली पक्कै अपनाउनुपर्छ।
युरिक एसिड ज्यादा हुनु र युरिक एसिडले हुने आरथाइटिस जसलाई हामी गाउट भन्छौँ, यी चाहिँ फरकफरक कुरा हुन्। कसैको युरिक एसिड सामान्य ७ भन्दा कम हुनुपर्नेमा ८–९ छ भने उसको जोर्नी नदुखेको पनि हुन सक्छ। कसैलाई त्यतिले पनि दुख्छ। युरिक एसिड ज्यादा हुनु र बढी सुन्निनु एउटै होइन। कसैको कम मात्रामा सुन्निन्छ भने कसैको धेरै मात्रामा सुन्निएको हुन सक्छ।
युरिक एसिडबाट हुने गाउटबाट चाहिँ जोेर्नीहरु एक्कसि सुन्निएर आउँछ। बेलुका राम्ररी सुतेको मान्छे बिहानपख एक्कासिदुखाइको महसुसगर्छ। विशेषगरी खुट्टाको बुढी औँला असह्य हुनेगरी दुख्छ। यो दुखाइ सामान्यतया दुई हप्तासम्म रहन्छ त्यसपछि आफैँ कम भएर जान्छ। कसैलाई १५ दिनमा त कसैलाई एक महिना या वर्षपछि दोहोरिएको हुन्छ। उपचार गरिएन भने त्यो मात्रा बढ्दै जान्छ।
-(डा विष्ट बाथ रोग विशेषज्ञ हुन्)
हैजासम्बन्धी समस्या पर्‍यो? ११८० मा फोन गर्नुस् जनस्वास्थ्यसम्बन्धी जोखिम पूर्वानुमान गरेर समस्या समाधानमा नागरिकलाई सहज होस् भनेर कामपाले सोमबारदेखि २४ घण्टा हटलाइन सञ्चालन गरेको जनाएको छ। १२ घण्टा पहिले
थप ४१ जनामा कोरोना संक्रमण, सक्रिय संक्रमित २०० नाघे स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार २ हजार ३३७ जनाको पीसीआर परीक्षणमा ३६ जना र १ हजार २१ जनाको एन्टीजेन परीक्षणमा ५ जना गरी ४१ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। १७ घण्टा पहिले